Muxuu Google Chrome u xayirayaa qaar ka mid ah sawirrada iyo fiidiyowyada si aan caadi ahayn - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Waa maxay sababta Google Chrome u xayirayo qaar ka mid ah sawirrada iyo fiidiyowyada si toos ah
Muxuu Google Chrome u xayirayaa qaar ka mid ah sawirrada iyo fiidiyowyada si aan caadi ahayn
Wixii ku soo kordha mustaqbalka Chrome, Google wuxuu soo bandhigi doonaa qawaaniin cusub oo ku saabsan waxyaabaha qaarkood ee ku xardhan bogagga shabakadda, sida sawirrada iyo fiidyowyada. Haddii waxyaabahaasi aaney aamin aheyn, biraawsarku si toos ah ayuu u xakameyn doonaa.
Google wuxuu si adag uga shaqeynayaa sidii uu u sugi lahaa shabakadda. Tan iyo 2013 iyo muujinta Snowden, way cadahay in shabakadda weyn ee internetka ay abaabushay saameynteeda si ay u carqaladeyso isku xirnaanta iyada oo aan la helin (HTTP). Waxaa la qaaday tillaabooyin kala duwan oo lagu dhiirigelinayo goobaha in ay u wareegaan xiriiro aamin ah (HTTPS), kuwaas oo aasaasi kara marin aamin ah adeegsadaha.
2014 tusaale ahaan, Google ayaa sameeyay difaacan qodobka tixraaca mashiinkeeda raadinta. Shirkadda Mountain View sidoo kale waxay isticmaashay biraawsarradeeda, Google Chrome, si cad looga hor tago dadka isticmaala internetka markay aadaan boggaga ayaga oo aan la wareegin xiriirka. Digniin ku socota shirkadda Mareykanka lagu xoojiyay waqtiga.
Sawirro ama fiidiyowyada qaarkood mar dambe kuma raaci karaan Chrome 81.
Dadaalkan ayaa sii socon doona saddexda nooc ee soo socda ee Google Chrome. Horraantii Oktoobar, qorshe-hawleed ayaa la soo saaray si looga wada hadlo waxa Google uu qorsheynayo inuu ku sameeyo "waxyaabaha iskujira" - waxyaabaha ka kooban (sida sawirrada, fiidyowyada, feylasha dhawaaqa, qoraallada ama qaababka) ee lagu xardhay HTTP bogagga kuwaasoo ku jira HTTPS.
Caqabada ayaa ah badbaadada dadka isticmaala internetka. Shirkadda Mareykan ah waxay moodeysaa xaalad halkaas oo qofka weerarka geystaa uu si been abuur ah u been abuuri karo sawirka shaxanka suuqa saamiyada si uu u khiyaaneeyo maalgashadayaasha. Sababta kale ayaa ah farriinta loo diray isticmaaleyaasha, maadaama ay ku taallo bog loo maleynaayo inuu amaan yahay, laakiin aan gebi ahaanba amaan aheyn, sababtoo ah cunsuryada ku rakiban nabadgelyo la'aan.
U gudub sedexda waji
Laga soo bilaabo Chrome 79, taas ayaa loo qorsheeyay Diseembar 10Google ayaa u adeegsan doonta goob cusub oo u oggolaaneysa isticmaaleha inuu xannibo waxyaabaha isku qasan ee ku yaal goobaha uu isagu doortay. Dejintan, oo lagu dhex galo astaanta qufulka ee ku xigta baarka cinwaanka, wuxuu ahaan doonaa qoraallo, aalado, iyo waxyaabo kale oo uu Chrome mar horeba xannibay.
Marka la sii daayo soo socota, Chrome 80, oo la filayo Febraayo 4 2020, kala-guurka ayaa sii socon doona iyada oo la beegsanayo ilaha codka iyo fiidiyowga. Biraawsarku wuxuu isku dayi doonaa inuu ku rakibo HTTPS oo, haddii aysan awoodin, wuxuu ku xayirayaa iyaga sida caadiga ah. Mar labaad, adeegsadayaashu waxay marin u heli doonaan goobta kor lagu soo sheegay haddii ay rabaan inay muujiyaan si kastaba. Sawirada ma saameyn doonto, laakiin Chrome ayaa soo saari doonta digniin.
Google wuxuu shaqeeyaa dhagaxaani dhowr bilood. // Xigasho: Numerama
Waxay la jirtaa Chrome 81, oo imaan doonta xilliga guga, in kiiska sawirada la dejin doono. Google ayaa isticmaali doonta iskumid isku mid ah: waxay isku dayi doontaa inay ku xirato HTTPS. Haddii ay dhacdo cilad, waxay ku xayiran doonaan sida caadiga ah. Chrome 81 ayaa calaamadayn doonta dhamaadka wareegaan. Ficil ahaan, Google waxay u muuqataa inay u maleyneyso in xannibaaddahan aysan daruuri u saameyn doonin soo bandhigida bogagga internetka, iyada oo ay ugu mahadsan tahay ku qasabidda barnaamijka HTTPS.
Intaa waxaa dheer, sirta xiriirinta ayaa caadi ka noqotay shabakadda. Bog heersare ahGoogle wuxuu aaminsan yahay in 90 100 bogagga ugu weyn adduunka, marka laga reebo kuwa isaga u gaarka ah, ay bixiyaan xiriiro aamin ah. Iyo boqollaalkan goobood waxay ku xisaabtamayaan qiyaastii 25% socodka internetka. Ugu dambeyntiina, waqtiga kama dambeysta ah ee ka haray Google iyo dabeecadda aadka u horumarsan ee xeerarka mustaqbalka ee ku saabsan waxyaabaha isku dhafan ayaa sidoo kale xaddidi doona jebinta, taasoo u oggolaaneysa waqti loogu talagalay bogagga inay la qabsadaan xaaladdan cusub.
Sawirka sawirka mid:
La wadaago shabakadaha bulshada
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.numerama.com/tech/567834-pourquoi-google-chrome-va-bloquer-par-defaut-certaines-images-et-videos.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=567834
1 Gb / s fiber ah ayaa laga bixiyaa 22 euro bishiiba nolosha? Tani waxay ka jirtaa RED - Tech - Numerama
Google Stadia hadda waa laga heli karaa dukaanka Play-ka, laakiin wali ma aad qulquli kartid cayaaraha.
Philippe Katerine ayaa dhalleeceeyay soddog sodonka Gérard Depardieu: "C
Video dheeraad ah3,445